September 2013 ~ ချမ်းငြိမ်း-မှော်ဝန်း
ဒီကောင်လေးကတော့ ပုံမှာတွေ့ရတဲ့ အတိုင်း desktop ပေါ်က shortcut တွေမှာ (arrow) မြှားလေးတွေ ပါလာတာကို Edition လုပ်နိုင်တဲ့ ဟာလေးပါ..။
ဒေါင်းလို့ရတဲ့ zip ဖိုင်လေးကို ဖြည်ပြီး ကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ windows version ကိုရွေးပြီး double click လိုက်ပါ..။
အဲလိုကျလာရင် ကျနော်ကတော့ No Arrow ကိုရွေးလိုက်ပါတယ်..။
desktop ပေါ်က shortcut တွေမှာ မြှားအကွေးလေးတွေ ပျောက်ပြီး လှပသေသပ်နေတာ တွေ့ရမှာပါ..။
CCleaner Professional & Bussiness Edition 4.06.4324
5:23:00 AM software No comments
အလည်လာတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးပါ..
ဒေါင်းလို့ရလာတဲ့ ccsetup406.exe ဖိုင်လေးကို ပုံမှန်အတိုင်းပဲ install အရင်လုပ်လိုက်ပါ..
Ccleaner Professional ဒါမှမဟုတ် Bussiness Edition 4.06.4324 လေးရပြီပေါ့ဗျာ..။
7:40:00 AM software No comments
TuneUp Utilities 2014 ဒီကောင်လေးကတော့ Utilities software တွေထဲမှာ
(NO.1) လို့ပြောရမဲ့ ကောင်လေးပါ..။ ကွန်ပျူတာကို ဖလန်းဖလန်းထအောင် မြန်ချင်ရင်တော့
version 2014 ရဲ့ New features တွေကတော့
1-Click-Maintenance and Automatic Maintenance,
TuneUp Browser Cleaner,
TuneUp Disk Cleaner,
TuneUp Disk Doctor,
TuneUp Disk Space Explorer,
TuneUp Drive Defrag,
TuneUp Economy Mode,
TuneUp Live Optimization,
TuneUp Process Manager,
TuneUp Program Deactivator,
TuneUp Registry Cleaner,
TuneUp Shortcut Cleaner,
TuneUp StartUp Manager,
TuneUp System Information,
TuneUp StartUp Optimizer,
TuneUp Undelete and TuneUp Uninstall Manager.
full version လေးဖြစ်အောင် Keygen လေးပါထည့်ပေးထားပါတယ်..။
Maxthon Cloud Browser 4.1.3.1200 Beta
7:10:00 AM software No comments
mozilla firefox သုံးရတာ လေးတယ်ထင်ရင်.. ဒီMaxthon
Browser လေးပြောင်းသုံးကြည့်ပါလား..။ လူကြိုက်တော်တော်များတဲ့ Browser လေးပါပဲ..။
သူက ဘာတွေ လုပ်နိုင်လည်းဆိုတော့
ကျနော် mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..။
zawgyifont ကို setting ကနေ အခုလို
သုံးကြည့်ချင်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.17build11.
5:06:00 AM software No comments
IDM 6.17 Build 11 ပါ.. ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.17 Build 11 ကိုဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
10:15:00 PM photoshop No comments
Adobe Photoshop CS6 Full version + Patch ဒါကတော့ လက်ရှိကျနော်သုံးနေတဲ့ Photoshop ပါ..။
သေချာပေါက် အဆင်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်..။ ဖိုင်ဆိုဒ်က 1.77 ရှိပါတယ် ။ ၇ ပိုင်းခွဲပြီး mediafire ကနေတင်ပေးထားပါတယ်..။full version ဖြစ်အောင် patch ကို အသုံးပြုရပါမယ်..။
အပိုင်း ၁ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
အပိုင်း ၂ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
အပိုင်း ၃ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
အပိုင်း ၄ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
အပိုင်း ၅ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
အပိုင်း ၆ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
အပိုင်း ၇ ကို ဒီမှာ ယူပါ။
၇ ပိုင်းလုံးဒေါင်းပြီးရင် အပိုင်း ၁ ကို right click ပေးပြီး Extract Here လုပ်ပြီး
အပိုင်းအားလုံးကို ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် Adobe Photoshop CS6 Full version + Patch လေးရပါပြီ..။
10:46:00 AM Android No comments
အခုက ဖုန်းမှဖုန်းပဲ ဖြစ်နေကြလို ဖုန်းသမားတွေအတွက် သေချာပေါက်အသုံးဝင်မှာ မို့ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..။
ဖိုင်ဆိုဒ်က 558 MB ရှိပါတယ်..။
သူ့ရဲ 100 Top Paid Android Apps & Themes Pack မှာပါဝင်တာတွေကတော့
DW Contacts & Phone & Dialer v2.5.5.1-pro.apk
GPS Navigation & Maps +offline v4.0.apk
HB-Verbrauchszähler v9.21 (German).apk
Mizuu - Movies & TV shows v2.1.1 paid.apk
100 Top Paid Android Apps & Themes Pack (Eng/6 September2013) လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
85 Top Paid Android Apps & Themes Pack (Eng/10 September2013) | 527 Mb ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
85 Top Paid Android Apps & Themes Pack (Eng/10 September2013) | 527 Mb - See more at: http://www.filegoats.com/2013/09/85-top-paid-android-apps-themes-pack.html#sthash.5pd5vNzn.dpuf
85 Top Paid Android Apps & Themes Pack (Eng/10 September2013) | 527 Mb - See more at: http://www.filegoats.com/2013/09/85-top-paid-android-apps-themes-pack.html#sthash.5pd5vNzn.dpufဒီမှာ
IDM 6.17 Build9ပါ.. ...Patch ဖိုင်လေးနဲ့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။ သူ့ကိုသွင်းပြီးသွားရင် ထုံးစံအတိုင်းကီးတောင်းနေပါလိမ့်မယ်.။ ပြသနာမရှိပါဘူး သူ့ကိုပိတ်လိုက်ပါ..။
Internet Download Manager 6.17 Build9ကို ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
10:23:00 PM antivirus No comments
Bitdefender သုံးတဲ့သူတွေအတွက် လက်ဆောင်မွန်ပါ..။
Bitdefender Total Security 2014 ကို ဒီမှာ ယူပါ..။
၆၆၈ ရက် အတွက် လိုင်စင်ကီးအပါအ၀င်
၁၅၁ ရက် စာ လိုင်စင် ကီးနဲ့
၁၆၁ ရက် စာ လိုင်စင်ကီး တို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်..။
Bitdefender လိုင်စင်ကီးတွေကို ဒီမှာ ယူပါ..။
Panda Antivirus Pro 2014 With6Months Free Activation
9:38:00 AM antivirus No comments
windows 8 သုံးတဲ့သူတွေ အကြိုက်တွေ့ စေမယ့် Panda Antivirus Pro 2014 With6Months Free Activation ပါ..။၆ လ free ဆိုလည်းနည်းလားဗျာ..။ လန်းချက်ကတော့ ကိုယ်တိုင်သာသုံးကြည့်လိုက်ဗျို့..။install လုပ်ရင်တော့ internet ရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်။ ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
8:16:00 AM နည်းပညာ No comments
USB အပါအ၀င် Drives တွေကို lock ချတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ..။
10:27:00 PM photoshop No comments
Photoshop CS6 Extended integrates 3D graphic design
11:57:00 PM photoshop No comments
Photoshop CS6 Extended integrates 3D graphic design သူကတော့ ဘာမှ ပြောစရာမလိုလောက်အောင် လူသိများပြီးသားပါ..။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 1.3GB ရှိပါတယ်..။
Improved manipulation of 3D designs and extrusions
Mercury Graphic Engine for 3D designs
Paint bucket to fill 3D creations
Paragraph panel to edit text easier and filter mode to edit what you want right on canvas
It analyzes images, takes out the data and exports information to study (Smart Sharpen technology and Camera Shake Reduction)
Instance Object option to duplicate objects and any change applied to them will be instantly added to the rest
New textures appliance
တို့ပါပဲ..လိုချင်ရင် ဒီမှာ ယူလိုက်ပါ..။
Panda Antivirus Pro 2014 With6Months Free Activa...